दूध उत्पादनमा बन्दाबन्दीको प्रभाव SULSULE:A Truly Nepali News Portal
कोरोनाको कहरले गर्दा आज आएर विश्वको आधाभन्दा बढी जनसंख्या बन्दाबन्दी (लकडाउन)मा रहेको अवस्था छ । यसलाई परास्त गर्न या जुध्नको लागि नेपाललगायत संसार नै एक ढिक्का हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । सामाजिक दूरीलगायत बन्दाबन्दी नै यसको एक मात्र अचुक औषधि हो भनी प्रमाणित भइसकेको छ । हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो । जहाँको ६५ प्रतिशत मानिसहरू कृषि कर्ममा लागेका छन् । कृषिका विभिन्न विधाहरूमध्ये दूग्ध व्यावसाय पनि एक प्रमुख पेशा हो । देशमा पशुजन्य र कृषिजन्य उत्पादनको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । यसरी पशुपालन र कृषिको सम्बन्ध एक अर्कोमा घनिष्ट रहेको छ । मुलुकमा कृषिको योगदान दिनहुँ बढ्दै गएको छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्यय उत्पादनमा दुग्ध क्षेत्रको नौ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।
देशको बारेमा कुरा गर्ने हो भने मुलुकमा वार्षिक झण्डै २० लाख मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये संगठित क्षेत्रको कारोबारबाट कुल उत्पादनको १५ प्रतिशतले मात्र बजार पाउन सकिरहेको छ । यसैगरी ३५ प्रतिशत दूध अनौपचारिक क्षेत्रको माध्यमबाट छुर्पी, खुवा, घिउजस्ता परम्परागत दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादनमा खपत भइरहेको छ । बाँकी ५० प्रतिशत दूध किसान स्वयंले खपत गरिरहेको पाइन्छ । नेपालभर औसत दैनिक रूपमा करिब छ लाख ३९ हजार लिटर दूध संगठित क्षेत्रको माध्यमबाट बिक्रीवितरण भई वार्षिक करिब सात अर्ब रूपैयाँ सहरबाट ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको छ । जसमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा मात्र दैनिक चार लाख ३० हजार लिटर दूध खपत भइरहेको छ ।
दुग्ध प्रशोधन, ओसारपसार, बिक्री वितरण कार्यमा करिब २० हजारले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाउनुका साथै देशभर करिब चार लाख ५० हजार किसान परिवार लाभान्वित भइरहेका छन् । यसर्थ ग्रामीण अर्थतन्त्रको मुख्य आधारस्तम्भ रहेको पशुपालन व्यवसायले स्वरोजगार सिर्जना तथा गरिबी निवारणमा गरेको योगदानकै कारण देश विकासमा यसलाई महत्व दिँदै आएको छ । भौगोलिक र वातावरणीय अनुकूलताले गर्दा नेपालमा पशुपालनको प्रचुर सम्भावना रहेको तथा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले यस क्षेत्रलाई नेपालको समग्र विकासमा प्रमुख योगदान दिने व्यवसायका रूपमा समेत चित्रण गरेको छ ।
यसरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कृषिको अनुपातिक योगदान बढेको देखिए पनि कृषिको कुल उत्पादनमा हस आएको देखिँदैन । राष्ट्रको कृषि वा पशुपालनलाई जीवन निर्वाहको बाटो नजानेर व्यवसायकै रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । मुलुकमा आधुनिक तथा संगठितरूपमा दुग्ध व्यवसायको सुरुवात विसं २००९ मा कृषि विभागअन्तर्गत काभ्रेको टुसाल गाउँमा सीमित क्षमताको दुग्ध प्रशोधनशाला स्थापना गरी भएको थियो । त्यस अघिसम्म जति पनि दूध बिक्री–वितरण हुन्थ्यो, ती सबै काँचो दूध परम्परागत रूपमा माना र पाथीमा नापेर हुने गर्थ्यो ।
वि.सं. २००९ मा सुरु भएको दुग्ध प्रशोधन कार्यलाई विसं २०११ मा तत्कालीन कृषि विभागअन्तर्गत दुग्ध विकास शाखाको स्थापना भई वि.सं. २०१३ मा न्युजिल्यान्ड सरकारको आर्थिक र संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत खाद्य कृषि संगठनको प्राविधिक सहयोगमा काठमाडौंको लैनचौरमा पाँच सय लिटर प्रतिघन्टा दूध प्रशोधन गर्न सक्ने क्षमता भएको दुग्ध प्रशोधनशाला स्थापना भएको थियो । यसर्थ देशमा दुग्ध क्षेत्रको विकासक्रमलाई अझ नियालेर हेर्दा राणाकालदेखि नै दुग्ध व्यवसायको सुरुवात भएको देखिन्छ । सन् १९१७ मा अर्थात् राणाकालमा युरोपबाट जर्सी गाई आयात गरेको देखिन्छ । यसरी मुलुकमा तीब्र रूपमा वृद्धि हुँदै गएको सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रका दुग्ध उद्योग र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ–संस्थाबीच सामञ्जस्य गराई राष्ट्रियस्तरमा दुग्ध व्यवसायसम्बन्धी नीति–निर्माण तथा दुग्ध विकास योजना तर्जुमा गरिएको थियो । यसको साथसाथै नेपाल सरकारलाई आवश्यक परेको समयमा राय सुझाबसमेत दिन बोर्ड ऐन ०४८ अनुसार विसं ०४९ वैशाख १७ मा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना भई आफ्नो उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।
पछिल्लो समय कृषक गाई भैंसी पाल्न छाडी अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेकोले पनि दूध उत्पादन दिनप्रतिदिन घट्दै गएको छ । दूधको माग बढ्दै गए पनि सोहीअनुरूप उत्पादन हुन नसक्दा मूल्य बढाउनु परेको हो । तत्काल दूधको मूल्य बढाइएको केही समयपछि अन्य दूग्धजन्य उत्पादनमा समेत मूल्य बढाउने तयारीमा संस्थान रहेको छ । यहाँ चाहेजति उत्पादन हुन नसक्दा भारतबाट दूध आयात गर्नुपरेको हो । पछिल्लो समय दूधको उत्पादन नै कम हुन थालेपछि बजारका मागअनुरूप आपूर्ति गर्न सकिएको छैन । हाल पनि बजारमा दूध अभाव रहेको छ ।
सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन भएको संस्थाले मागअनुरूप दूध वितरण गर्न नसक्दा पछिल्लो समय निजीस्तरबाट सञ्चालित डेरीले दूध बजारको आधा हिस्सा ओगटेको छ । सरकारले दूध उत्पादन गर्ने वस्तुहरूको मूल्यमा बृद्धिको साथसाथै दूधको पनि मूल्य बढाइएको बुझिएको छ । पछिल्लो समय दूधको उत्पादन नै कम हुन थालेपछि बजार मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकिएको संस्थानले वताउँदै आएको छ । अहिले पनि बजारमा दैनिक तीन लाख लिटर दूधको अभाव रहेको छ । स्थानीय उत्पादनले बजार माग धान्न नसकेपछि भारतबट दैनिक ३० देखि ३५ हजार लिटर दूध आयात गर्ने गरेको छ । अतः बढ्दो जनसंख्यासँगै दूधको माग पनि बढ्दै गएकाले स्थानीय माग पूरा गर्न भारतबाट ठूलो परिमाणमा दूध संस्थानले आयात गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय कृषक गाई भैंसी पाल्न छाडी अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेकाले पनि दूध उत्पादन दिनप्रतिदिन घट्दै गएको छ । संस्थानले कृषकहरूसँग दूध संकलन गरी विक्री गर्ने गरेको छ, जसमा ६० प्रतिशत भैंसीको र ४० प्रतिशत दूध गाईबाट उत्पादन हुनेगरेको छ । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन भएको संस्थानले माग अनुसार दूध वितरण गर्न नसक्दा पछिल्लो समय निजीस्तरबाट सञ्चालित डेरीले दूध बजारको आधा हिस्सा ओगटेको छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा विश्वव्यापी रूपमा सताइरहेको कोभिड–१९ को प्रभाव दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थका क्षेत्रमा पनि व्यापक रूपमा परेको छ । यसविरुद्धको रोगथामको रामवाणको रूपमा रहेको बन्दाबन्दी कारण होटल एवं रेष्टुरेन्ट पूर्णरूपमा बन्दाबन्दी भएपछि काठमाडौंँ उपत्यकालगायत देशैभरि दूध खपत घटेको हो । मूलतः दूधको माग घटेपछि सबैभन्दा बढी मर्कामा किसान परेका एकातिर छन् भने अर्कोतिर उपभोक्ताहरू पनि दूध उपभोग गर्नबाट बञ्चित रहेको अवस्था छ । जसको कारणले गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा साबिकको तुलनामा अहिले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपत २० प्रतिशतभन्दा कम भएको छ । जबकी कोरोनाको प्रभावभन्दा अघि देशभर दैनिक ६२ लाख ५० हजार लिटर दूध किसानले उत्पादन गर्दै आएका थिए ।
किसानले उत्पादन गरेको दूधमध्येमा आधा आफैँले प्रयोग गरेर ३१ लाख ५० हजार लिटर बिक्री हुँदै आएको थियो । बिक्री भएको दूधमध्ये काठमाडौँमा दैनिकरूपमा करिब चार लाख लिटर दूध खपत हुँदै आएको थियो तर कोरोना भाइरसको प्रभावपछि एक लाख ५० हजार लिटर मात्र खपत भएको छ । यसको साथसाथै काठमाडौँ उपत्यकामा खपत हुने दूधमध्ये निजी क्षेत्रको ६० र सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल दुग्ध संस्थान (डीडीसी)को ४० प्रतिशत दूध उपत्यकामा मात्रै खपत हुने गरेको थियो । यसैक्रममा काठमाडौं उपत्यका बाहिर भने करीव १५ प्रतिशत खपत घटेका बताइएको छ । यस अवस्थामा दूध उत्पादन गर्ने कृषकहरूमा ठूलो समस्या परेको छ ।
कृषकहरूलाई यतिखेर आफ्ना गाइवस्तुहरूलाई खुवाउने दानाको अभावले गर्दा धेरै समस्या पर्ने एकातिर छ भने अर्कोतिर उत्पादित दूधलाई बजारसम्म लैजान अपठरो अवस्था रहेको छ । जसले गर्दा स–सानास्तरका कृषकहरूलाई यसले गर्दा ठूलो मर्का पर्ने हुन्छ । नेपाल कृषिप्रधान देश हो र कृषि पेसाको आधारस्तम्भ भनेकै पशुपालन हो । नेपालमा हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पशुपालन व्यवसायले ओगटेको तथ्यांकलाई मूल्यांकन गर्दा ग्रामीण क्षेत्रको प्रमुख आयस्रोतका रूपमा पशुपालन व्यवसाय देखिन्छ । दुग्ध व्यवसायलाई ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी निवारणको प्रमुख आधार बनाउन सकिने सम्भावना प्रचुर मात्रामा रहँदा रहँदै पनि यस क्षेत्रमा समस्या उत्तिकै छन् । दूधको मूल्य बढाउने आधारभूर्त कारण भनेको दूधको मूल्यमध्ये ६९ प्रतिशत किसान र ३१ प्रतिशत उद्योगलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । मुलुकमा अहिले मागको आधारमा दूध उत्पादन हुन सकेको छैन । हरेक व्यक्तिको लागि वार्षिक ९२ लिटर दूध आवश्यक पर्ने भए पनि पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा दूध उपलब्धता प्रतिव्यक्ति ७८ दशमलव ३५ लिटर पुगेको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)